Qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad tahay bilaa shaqo. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso magdhabkan.
Waa maxay Qasnada shaqo la’aanta?
Filimkan ayaa sharaxaya waxa Qasnada shaqo la’aantu tahay iyo siday u shaqayso. Ku baxaysa Iswiidhish.
Sidee ayaan u codsanayaa magdhabka laga helo qasnada caymiska?
Iska diiwaan-geli xagayaga maalinta ugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo.
Haddii aanad xubin ka ahayn mid kamid ah qasnadaha shaqo la'aanta waxaad si kastaba ha ahaatee fursad u leedahay inaad hesho wax magdhab ah. Waxaad awoodaa laba arimood oo kala ah
inaad codsato xubinimo xilliga aad noqotay shaqo la'aan
codsato magdhabka laga helo qasnada Alfakassan
Maxaa shuruud u ah in la helo qasnada shaqo la'aanta?
Si aad u hesho qasnada shaqo la'aanta waa inaad naga diiwaan-gashanaataa xagayaga. Waxaad u baahantahay inaad diyaar u ahaato inaad awoodo inaad qaadato shaqo si toos ah. Tani waxay tahay inaanad ahayn qof ku qoran xanuun, inaad joogto Iswiidhan iyo inaad diyaarsatay wixi xanaano caruur ah ee aad u baahan karto.
Si loo helo xaqa magdhab waa inaad xitaa horey u soo shaqaysay. Waxaad u baahantahay inaad buuxiso mid ka mid ah shuruudahan soo socda:'
Inaad soo shaqaysay ugu yaraan lix bilood oo leh ugu yaraan 80 saacadood calaa bil kasta intii lagu soo jiray sanadkii ugu dambeeyay.
Inaad soo shaqaysay ugu yaraan 480 saacadood xilli ah 6 bilood oo isku xiga, lehna ugu yaraan 50 saacadood mid kasta oo ka mid ah 6-daas bilood intii lagu soo jiray sanadkii ugu dambeeyay.
Waxaad heli kartaa laba mid ahaan, magdhab ku salaysan dakhligaagi hore ama waxa lagu magacaabo magdhabka aasaasiga ah. Nooca magdhabka aad helayso waxay ku xirantahay inta ay leegtahay wakhtiga aad ka soo mid ahayd qasnada shaqo la'aanta.
Magdhabid ku salaysan dakhligaaga
Waxaad heli kartaa ilaa iyo boqolkiiba 80 u dhiganta mushaaradaadi hore, iyo ugu badnaan 20 000 karoon calaa bil ka hor intaan canshuurta laga jarin haddii aad xubin ka tahay qasnada shaqo la'aanta ugu yaraan hal sano.
Magdhabka aasaasiga ah
Magdhabka aasaasiga ahi waa ilaa iyo 8 000 karoon calaa bil ka hor intaan canshuurta laga jarin, waxay ku xirantahay inta ay leegtahay waxa aad horey u soo shaqaysay. Tani waad codsan kartaa haddii aanad xubin ka ahayn qasnad shaqo la'an ama aad xubin ka soo ahayd wakhti ka yar hal sano. Waa inaad xitaa buuxisay 20 sano.
Waa qasnadaada shaqo la'aanta kuwa go'aaminaya wixi ku saabsan magdhabida ee xisaabinaya inta uu leegyahay magdhabka aad xaqa u leedahay.
Maxaa shuruud u ah in aad haysato qasnadaada shaqo la'aanta?
Marka aad hesho qasnada shaqo la'aanta waxaa muhiim ah inaad fir-fircoonaato oo aad raadiso shaqo. Ka fikir inaad u baahantahay inaad diyaar u ahaato inaad balaariso raadintaada, markay noqoto laba arimoodba, xirfada iyo halka ka mid ah dalka ee shaqo ka.
Waxaa lagaaga baahanyahay inaad ka qayb-qaadato hawlaha aynu ku heshiinay iyo inaad timaado kulamada aanu ku balaminay. Haddii wax caqabad ahi kugu timaado waxaad u baahantahay inaad noo soo sheegto. Waxaa kale oo lagaaga baahanyahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga bil kastaba.
Samee warbixinta hawlahaaga
Qasnada shaqo la'aanta ee gudaha Yurub.
Miyaad ka fikiraysaa inaad ka shaqayso ama miyaad ka soo shaqaysay dal kale oo ku yaala Yurub? Gudaha aaga EU/EES iyo Iswiisarlaan waxaa jira sharciyo loogu talogalay in aanad waayin amaanka bulsho haddii aad u kala dhaq-dhaqaaqdo inta u dhaxaysa dalal kala duwan.
Sii qaado magdhabida si aad shaqo uga raadsato gudaha Yurub
Haddii aad xaq u leedahay magdhabid laga helo qasnada shaqo la'aanta ee gudaha Iswiidhan waxaad codsan kartaa inaad sii qaadato magdhabidaada si aad shaqo uga raadsato dal kale oo ka mid ah EU/EES ama Iswiisarlaand.
Waa inaad si buuxda u ahayd bilaa shaqo oo aad naga diiwaan gashanayd ugu yaraan afar toddobaad ka dib markaad noqotay bilaa shaqo.
Ka fikir inaad codsato ka hor intaanad safrin. Waxaad ka codsanaysaa Kormeerida caymiska shaqo la'aanta, IAF.
Ka codso shahaadada dhanka bogga intarnatka ee IAF
La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta haddii aad hayso wax su'aalo ah
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan magdhabkaaga, xubinimadaada ama wax kale, la xiriir qasnadaada shaqo la'aantaada. Dhanka bogaga intarnatka ee qasnadaha shaqo la'aanta ee Iswiidhan waxaad ka helaysaa macluumaadka xiriirka ee dhamaan qasnadaha shaqo la'aanta.
Dhanka bogga intarnatka ee Hej a-kassa waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qasnada shaqo la'aanta. Halkan waxaad xitaa ka helaysaa talo-bixinta marka aad dooranayso qasnada shaqo la'aanta.
Digniin iyo yaraynta magdhawga
Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin ama waayi kartaa magdhabkaaga hal ama dhowr maalmood. Waa qasnadaada shaqo la'aanta kuwa baaraya ee go'aan ka gaaraya wixi ku saabsan arintan.